तीन हप्तामा कार्यकारीको सरुवा - Worldnews.com
तीन हप्तामा कार्यकारीको सरुवा
पालगन्ज उप महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख सरुवा भएका छन्। फागुन १७ गते नेपालगन्जमा हाजिर भएका कृष्णप्रसाद चापागार्इंलाई सरकारले सरुवा गरेको उपमहानगरपालिकाका प्रशासन फाँट प्रमुख राजकुमार कार्कीले बताउनुभयो। कार्यकारी अधिकृत चापागाईं आइतबार हाजिरी गरेर मन्त्रालयतर्फ गएका छन्। ‘अहिलेलाई बिदा भनिएको छ।
नौ महिनामै फेरिन्छन् हाकिम
कुमार श्रेष्ठ, बाँके नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा नौ महिनामा दुई हाकिम (कार्यकारी अधिकृत) को सरुवा भएको छ। विष्णुप्रसाद भूसालको दरबन्दी रहेको नेपालगन्जमा त्यसपछिका दुई जना...
News of Nepal (NewsDB Live) 2017-02-28
३२६ प्रदेशसभाको नतिजा सार्वजनिक ! (सूची)
काठमाडाैं । प्रदेशसभाका प्रत्यक्षतर्फ ३३० स्थानमध्ये हालसम्म ३२६ स्थानको मत गणना सकिएको छ । जसअनुसार नेकपा एमाले १६६, नेकपा माओवादी केन्द्र ७३, नेपाली कांग्रेस ३९, संघीय...
कुमार श्रेष्ठ, बाँके गाडीको चाप र जथाभावी रोकेर दुर्घटना बढाउने काम भएपछि सुर्खेतरोडमा पार्किङस्थलको खोजी भएको छ। राँझाचोकदेखि गणेशमानचोकसम्मका क्षेत्रमा कहाँ–कहाँ...
News of Nepal 2017-11-20
निर्वाचनको मुखमै देशभर बम आतंक !
काठमाडौं । निर्वाचन नजिकींदै गर्दा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा वम पड्कनेक्रम रोकीएको छैन । आज लालीगुरास नगरपालिका–१ र संखुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका–३ स्थित बसन्तपुर सडकको...
जिविस अब समन्वय समिति
हेटौंडा,(नेस)÷जिल्ला विकास समिति मकवानपुरको काम सोमबाराट समन्वय समितिमा सीमित भएको छ । पहिले जिल्लाभरको विकास योजनाका काम गर्दै आएको जिविसले ब्यवहारिक रुपमा समन्वय समितिको...
यी हुन नेकपा एमालेका ४४० समानुपातिक उम्मेदवार (सूचीसहित)
काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदबार बनेकाहरूकाे सूचि सार्वजनिक गरेको छ । अागामी मंसिर १० र २१ मा हुने...
काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फबाट समानुपातिकमा उम्मेदबार बनेकाहरूकाे सूचि सार्वजनिक गरेको छ । अागामी मंसिर १० र २१ मा हुने निर्वाचनका लागि दुवै तहमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचि गएको असोज २९ मा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको थियो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार समानुपातिक सूचिमा प्रतिनिधिसभामा ११० र प्रदेशसभामा ३३० जनाको नाम रहेको...
शिक्षा सेवामा किचलो, कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न अस्वीकार
ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं शिक्षा सेवामा कार्यरत उपसचिवले आफूभन्दा कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृतको मातहतमा रहेर काम गर्न नसक्ने भन्दै मन्त्रालयमा हाजिर हुन पत्राचार गरेका छन्। एक त शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका शिक्षा सेवाका कर्मचारी स्थानीय निकायमा नगएको र गइसकेको स्थानमा कनिष्ठ कार्यकारी अधिकृत रहेकाले शिक्षा सेवाका कर्मचारीमा विरोध शुरू भएको छ। बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा खटिएका कर्मचारी...
सडकमा मरेका पशुलाई गाड्ने रणनीति
नेपाल समाचारपत्र बाँके एक दिनअघि न्यूरोडमा एउटा गधा मर्यो। स्थानीयले खबर गरेपछि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको टोली पुग्यो। मरेको गधालाई कहाँ लगेर फाल्ने समस्या भयो। नगरपालिकाको टोलीले नजिकै खाली जग्गा खोज्न थाल्यो। स्थानीयले नेपाल बैंक लिमिटेडको पछाडि रहेको खालि जग्गा देखाइदिएपछि त्यही खाल्टो खनेर गाडियो। नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले सडकमा मरेका गाई, गधा, कुकुर, बिरालोलाई गाड्ने...
मोतीराम तिमल्सिना, काभ्रे । जिल्ला शिक्षा कार्यालय काभ्रेले आयोजना गरेको बजेट तर्जुमासँग सम्वन्धित प्रवोधिकरण कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बजेट भन्दा पहिला कर्मचारी पठाउन अनुरोध गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उद्धव केसीसँग तत्काल शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न, कर्मचारी खटाउन प्रमुखहरुले माग गरेका थिए । जिल्ला शिक्षा समितिको संयोजक जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख हुने...
कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको भन्दै वडाध्यक्षद्वारा अधिकृतको कक्षमा ताला
चरिकोट, कर्मचारी सरुवामा मनपरी गरेको भन्दै एक वडाध्यक्षले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका छन् । दोलखाको भीमेश्वर नगरपािलकाका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष हरिशरण शिवाकोटीले वडा कार्यालयको कर्मचारी सचिवलाई आफ्नो सहमतिविपरीत सरुवा गरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा ताला लगाइदिएका हुन्् । वडाध्यक्ष शिवाकोटीले वडाका सचिव...